आज २०७७ साल बैशाख ३ गते बुधवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख ३ गते बुधवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष सहयोगी हातहरू अघि बढ्नेछन् । आफन्तको प्रगतिमा […]
काठमाडौँ, २ वैशाख । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न जारी बन्दाबन्दीका बीच नयाँ वर्ष २०७७ शुरु हुँदा धेरै नेपालीका घरमा भित्तेपात्रो उपलब्ध हुन सकेन । पात्रो (पञ्चाङ्ग) माघ पहिलो साता नै बजारमा आइसके पनि बन्दाबन्दी शुरु हुनुअघि भित्तेपात्रो बजारमा यथेष्ट मात्रा आइसकेको थिएन । बजारमा आउन लागेका भित्तेपात्रोलाई पनि कोरोनाको त्रासले प्रभाव पारेको […]
आज २०७७ साल बैशाख २ गते मंगलवारको राशिफल
आज २०७७ साल बैशाख २ गते मंगलवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । धैर्य […]
आज २०७६ साल चैत ३० गते आइतवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत ३० गते आइतवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । मानसिक […]
आज २०७६ साल चैत २९ गते शनिवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत २९ गते शनिवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । […]
आज २०७६ साल चैत २८ गते शुक्रवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत २८ गते शुक्रवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । […]
आज २०७६ साल चैत २७ गते बिहिवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत २७ गते बिहिवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज आँटेको र ताकेको कार्यहरू विस्तारै अघि […]
प्रत्येक विहान यी कामहरु गर्नुहोस् चम्किनेछ भाग्य ! यदि कोही व्यक्तिको कुण्डलीमा ग्रह सम्बन्धी कोही दोष भएमा भाग्यले साथ नदिने विश्वास गरिन्छ । कुण्डलीको दोषबाट टाढा रहनका लागि ज्योतिषले कैयौ उपायहरु बताउने गर्दछन् । ज्योतिषले बताएका उपाय अपनाउदा निकट भविष्यमा सकारात्मक फल मिलने सम्भावना बढ्ने विश्वास गरिन्छ । शास्त्रमा पत्नीलाई पतिको आधा अंग मानेर पत्नीलाई […]
आज २०७६ साल चैत २६ गते बुधवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत २६ गते बुधवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । विशिष्ट […]
आज २०७६ साल चैत २५ गते मंगलवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत २५ गते मंगलवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । […]
आज २०७६ साल चैत २४ गते सोमवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत २४ गते सोमवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज सामाजिक तथा धार्मिक कृत्यमा मन जानेछ […]
आज २०७६ साल चैत २३ गते आइतवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत २३ गते आइतवारको राशिफल । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज धार्मिक सामाजिक कार्यमा विशेष रुचि रहनुका […]
आज २०७६ साल चैत्र २१ गते शुक्रवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत्र २१ गते शुक्रवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष गरेको काममा ढिलासुस्ती हुनेछ । सौन्दर्यतामा धन खर्च […]
आज २०७६ साल चैत्र २० गते बिहिवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत्र २० गते बिहिवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । जोश जाँगर […]
आज २०७६ साल चैत्र १९ गते बुधवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत्र १९ गते बुधवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष आज धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । विशिष्ट […]
आज २०७६ साल चैत्र १८ गते मंगलवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत १८ गते मंगलवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, […]
आज २०७६ साल चैत्र १७ गते सोमवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत १७ गते सोमवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, […]
आज २०७६ साल चैत्र १६ गते आइतवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत १६ गते आइतवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, […]
आज २०७६ साल चैत्र १५ गते शनिवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत १५ गते शनिवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, […]
आज २०७६ साल चैत्र १४ गते शुक्रवारको राशिफल
आज २०७६ साल चैत १४ गते शुक्रवार । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? यस्तो छ आजको राशिफल- मेष (चु चे चो ला लि लु ले लो […]